Pre-Order နဲ့တင် အရောင်းရဆုံးစံချိန်ချိုးသွားပြန်တဲ့ EXO – Trend.com.mm
Fan တွေအတွက်တော့ နောက်ထပ်ဂုဏ်ယူစရာသတင်းတစ်ခုပါပဲ။
SM Entertainment ရဲ့အဆိုအရ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာမယ့် EXO ရဲ့ 
အယ်လ်ဘမ် “DON’T MESS UP MY TEMPO”ဟာ အခွေမထွက်ရသေးခင်မှာပဲ ကြိုမှာထားကြလို့ အချပ်ရေ 1,104,617 တောင် ရောင်းကုန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။
ပထမဆုံးထွက်ရှိတဲ့အယ်လ်ဘမ်ကစလို့ EXO ဟာ အမြဲတမ်း အချပ်ရေ ၁သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာပါ။အခုလည်း နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်မှထွက်မယ့် အယ်လ်ဘမ်ဟာ pre-order နဲ့တင် အချပ်ရေ ၁သန်းကျော်နေလို့ “Quadruple Million Seller” ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တောင်ရရှိတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။
— N⁹⁴ (@EXOnebulae) October 31, 2018
နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကလည်း ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရမ်းကိုဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။တွစ်တာတွေ၊အင်စတာဂရမ်တွေမှာ သူတို့ EXO ကို ချီးမွမ်းထားကြတာအများကြီးပါ။ကဲ ဒီက EXO fan လေးတွေရော မပျော်ကြဘူးလား ?
— . (@loveshotmv) October 31, 2018
— ´.△`❄ [ia] (@innocentaeri) October 31, 2018
exo already claiming that quintuple million seller title from just the preorders when the new album hasn’t even dropped yet your faves can’t even spell legendary #EXO_QuintupleMillionSeller https://t.co/5UbB2hrn2V
— thank you f(x) (@yeolmeu) October 31, 2018
Fan တှအေတှကျတော့ နောကျထပျဂုဏျယူစရာသတငျးတဈခုပါပဲ။
SM Entertainment ရဲ့အဆိုအရ နိုဝငျဘာလ ၂ရကျနမှေ့ာထှကျရှိလာမယျ့ EXO ရဲ့ အယျလျဘမျ “DON’T MESS UP MY TEMPO”ဟာ အခှမေထှကျရသေးခငျမှာပဲ ကွိုမှာထားကွလို့ အခပျြရေ 1,104,617 တောငျ ရောငျးကုနျသှားပွီလို့သိရပါတယျ။
ပထမဆုံးထှကျရှိတဲ့အယျလျဘမျကစလို့ EXO ဟာ အမွဲတမျး အခပျြရေ ၁သနျးကြျောရောငျးခနြိုငျခဲ့တာပါ။အခုလညျး နိုဝငျဘာလ ၂ရကျမှထှကျမယျ့ အယျလျဘမျဟာ pre-order နဲ့တငျ အခပျြရေ ၁သနျးကြျောနလေို့ “Quadruple Million Seller” ဆိုတဲ့ဂုဏျပုဒျတောငျရရှိတော့မယျလို့သိရပါတယျ။
နိုငျငံတကာပရိသတျတှကေလညျး ဒီသတငျးနဲ့ပတျသကျပွီးအရမျးကိုဂုဏျယူနကွေပါတယျ။တှဈတာတှေ၊အငျစတာဂရမျတှမှော သူတို့ EXO ကို ခြီးမှမျးထားကွတာအမြားကွီးပါ။ကဲ ဒီက EXO fan လေးတှရေော မပြျောကွဘူးလား ?